Antony 7 hampiasa VPN amin'ny iPhone na iPad | Vaovao IPhone
Antony 7 hampiasa VPN amin'ny iPhone na iPad anao
Miguel Hernandez | | iPhone, IPhone Security
ny VPN dia vokatra lozisialy izay takian'ireo mpampiasa erak'izao tontolo izao, ity karazana haitao ity dia ahafahanao manampy "plus" fiarovana sy tsiambaratelo amin'ny fizahanao, na dia amin'ny tranga sasany aza dia mamela anao hiditra ao anaty atiny izay voasakana ao amin'ny faritra misy anao.
Izany no antony hiresahanay aminao ny tombony azo amin'ny fananana VPN amin'ny iPhone na iPad anao sy ny fomba ahazoanao tombony amin'izany. Jereo miaraka aminay ireo vaovao rehetra momba ny VPN ireo ary araraoty ny tombony azo avy aminy noho ireo toro-hevitra sy fika momba an'io raharaha io.
1 Tsiambaratelo bebe kokoa
2 Jereo ny atiny Netflix avy amin'ny faritra rehetra
3 Kalitao sy vidiny
4 NordLynx, hafainganam-pandeha bebe kokoa
6 Tsiambaratelo tanteraka
7 Fahafahana fitaovana maro
Tsiambaratelo bebe kokoa
Tambajotra tsy miankina virtoaly, na VPN raha fintinina, dia teknolojia tambajotra ahafahanao mifandray amin'ny tambajotra tsy miankina virtoaly, amin'ny alàlan'ny tamba-jotra fidirana ho an'ny daholobe. Ny tambajotra tsy miankina virtoaly dia ho mpizara na mpamatsy VPN ampifandraisintsika, ary ny tamba-jotra fidirana amin'ny besinimaro dia ny fifandraisanao amin'ny Internet, na inona na inona karazana nampiasanao. Ity karazana tambajotra ity dia tena miely tokoa amin'ny alàlan'ny fifandraisan-davitra, satria hahafahantsika mifandray amin'ny tambajotra ivelany sy miantoka ny fanafenana ny angon-drakitra, ary miditra amin'ny serveran'ny orinasanay mora foana aza.
Ny hafa amin'ny asany lehibe indrindra dia ny an'ny hosoka ny toerana, ny fitaovanao dia hifandray amin'ny mpizara VPN ary ity dia hiaraka amin'ny Internet, noho izany hisaron-tava amin'ilay nomena ny mpizara VPN ny IP-nao. Afaka miditra amin'ny atiny voasakana ao amin'ny faritra misy anao ianao amin'izay. Amin'izany fomba izany, afaka manampy fiarovana fanampiny koa izahay izay misakana ny "hackers" tsy hanaraka anay amin'ny fitaovantsika ary hialana amin'ny fameperana avy amin'ny ISP anao, izany hoe raha mifandray amin'ny tamba-jotra tsy miankina izay manakana anay tsy hiditra tranokala toa ny YouTube izahay, afaka miditra isika raha miditra amin'ny alàlan'ny VPN.
Jereo ny atiny Netflix avy amin'ny faritra rehetra
Rehefa eo amin'ny Netflix mampifandray amin'ny alàlan'ny mpamatsy Internet amin'ny besinimaro isika dia tsy hiditra amin'izany irery atiny izay voalahatra ao amin'ny Netflix ao amin'ny faritra misy anay. Mahamenatra izany satria maro amin'ireo horonantsary sy andian-tsarimihetsika navoaka tany amin'ny faritra hafa no nadika tamin'ny fitenintsika, ary noho izany dia mandany votoaty marobe isika satria voasakana ao amin'ny faritra misy antsika izany. Mora ny manamboatra azy amin'ny alàlan'ny a VPN toy ny NordVPN.
Ny fahaizana mankafy ny Netflix avy amin'ny firenen-kafa dia tena tsotra, mila manaraka fotsiny ianao Ireto misy dingana manaraka:
Misorata anarana amin'ny NordVPN ary apetraho ny rindrambaiko mety ho an'ny fitaovanao manokana
Raha vantany vao miditra ianao, mifandraisa amin'ny mpizara amin'ny firenena na faritra mahaliana anao, dia afaka misafidy amina am-polony toy ny United Kingdom na Etazonia Etazonia
Midira ao amin'ny kaontinao Netflix
Hanomboka hanome anao atiny ho azy ny Netflix momba ny toerana nofidinao tamin'ny alalàn'ny VPN, Ary izany no maha-mora ny mahita ny atin'ny Netflix avy amin'ny karazana faritra amin'ny alàlan'ny VPN. Tsy hiteraka olana aminao izany ary afaka mankafy tsy misy risika ianao.
Kalitao sy vidiny
NordVPN dia sarany mba hifanaraka amin'ny tsena na eo aza ny fananana endri-tsarimihetsika lafo vidy. Ambany 10 euro isam-bolana, Azonao atao mihitsy aza ny mahazo fihenam-bidy hatramin'ny 72% raha misafidy ny drafitra roa taonan'ny NordVPN ianao
Amin'ity taha mora ity dia afaka mifandray ianao fitaovana enina ho an'ny mpizara 5.500 XNUMX mahery, ary koa manararaotra ny serivisy rahona handefasana rakitra miaraka amina encryption data 2,64 euro ihany.
Raha tsy ampy izany, NordVPN izao manolotra fihenam-bidy 72% amin'ny drafitra 2 taona ary fanomezana maimaimpoana mandritra ny 3 volana, izay mbola lehibe kokoa aza.
NordLynx, hafainganam-pandeha bebe kokoa
Ny ekipan'i NordVPN miasa amin'ny protocol vaovao mifototra amin'ny WireGuard antsoina hoe NordLynx, Midika amin'ny hafainganam-pandeha bebe kokoa izany rehefa mivezivezy amin'ny VPN ary ambonin'izany rehetra izany dia mino fa misy fiarovana sy fiainana manokana. Amin'izao fotoana izao dia miasa amin'ny Linux izy io, saingy tsy ho ela dia hahatratra sehatra hafa toa ny Windows na macOS izy. Ny tanjona dia ny hifandraisan'ny mpanjifa amin'ny mpizara VPN akaiky indrindra ary ny mpizara atiny mba ho akaiky araka izay azo atao amin'ny mpizara VPN resahina.
Ny hafainganam-pandehan'ny fampidinana amin'ny alàlan'ny NordLynx dia nitondra valiny tany Etazonia ambony lavitra noho ny an'ny IKEv2 ary milamina kokoa noho ny an'ny OpenVPN. Miaraka amin'ny taha ambony indrindra manodidina ny 20 Mbps sy salan'isa 15 Mbps. Ny valiny dia amin'ny ankamaroan'ny scenario NordLynx manome vokatra tsara kokoa noho ny OpenVPN sy IKEv2, na amin'ny haingam-pandeha na amin'ny hafainganam-pandeha fampidinana votoaty. Mampiseho fandrosoana lehibe amin'ny fampandrosoana VPN, izay ny lafiny ratsy lehibe indrindra dia ny hafainganam-pandehan'ny fifandraisana, indrindra fa izao dia afaka mijery ny atiny amin'ny vahaolana 4K amin'ny sehatra toa an'i Netflix.
Noho izany, NordVPN dia VPN haingana indrindra eny an-tsena, miaraka amin'ny hafainganam-pandeha tokony ho 527 Mbps, somary lavitra ny VPN haingana faharoa, izay 282 Mbps ihany.
Ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia mifandraika indrindra rehefa miloka amin'ny serivisy misy ireo toetra ireo isika, amin'izay vao afaka manome fahafaham-po ny filantsika. NordVPN dia manana ny fanohanan'ny mpanjifa 24 ora isan'andro, 7 andro isan-kerinandro. Azonao atao ny miditra ao aminy isaky ny tianao avy amin'ireo làlana telo lehibe:
Amin'ny alàlan'ny Ivotoerana Fanampian'ny mpampiasa NordVPN
Amin'ny alàlan'ny serivisy an-tariby
Amin'ny alàlan'ny mailaka
Ao amin'ny NordVPN dia tsy manara-maso na mitahiry angona momba ny mpampiasa izy ireo, samy irery sy tsy mitonona anarana avokoa, noho izany ny fidirana an-tsokosoko an'ity angon-drakitra ity avy amin'ny vatana rehetra dia tsy azo atao. Ity fampanantenana avy any NordVPN ity Nankatoavin'ny auditor tsy miankina io. Rehefa mifandray amin'ny mpizara VPN ianao dia tsy afaka mahita ny ataonao amin'ny Internet intsony ny ISP-nao. Na izany aza, manana izany fahefana izany ny mpamatsy VPN anao. Zava-dehibe tokoa ny fahalalana hoe karazan-kazo (fampahalalana momba anao sy ny hetsika an-tserasera) tazomin'ny mpamatsy anao, amin'ny tranga NordVPN dia tsy misy fanarahan-dia.
Io dia manohana indrindra ny fampiasana fitadidiana ram ary mitsitsy fanjifana angovo, indrindra amin'ireo fitaovana izay mifandray amin'ny tamba-jotra. Raha tsy misy fisalasalana, ireo dia lafiny tena lehibe rehefa dinihina ny fomba ifandraisantsika, VPN dia mety manana tombony maro, fa raha tsy nifandray tamin'ny VPN mety isika dia mety hitranga fa ny fahombiazan'ny fitaovana dia misy fiantraikany lehibe amin'ny endrika ratsy. Tokony hotadidinao ao an-tsaina foana ity manaraka ity:
ny karazana data angonin'ny serivisy momba ny mpampiasa sy ny fampiasany ny internet;
ny fitaovana fanampiana na fanarahana ivelany ampiasainao;
ny firenena iasan'ny serivisy sy ny fepetra takian'ny lalàna eo an-toerana amin'ny fanangonana angona mpampiasa;
ny safidin'ny fandoavam-bola atolotry ny serivisy sy ny fifandraisan'izy ireo amin'ny mombamomba ny mpampiasa.
Mazava ho azy fa noho ny antony rehetra voalaza dia toa izany NordVPN mety ho safidy mahaliana ho an'ny iPhone sy iPad-ntsika izany.
Fahafahana fitaovana maro
Ny vokarin'ny NordVPN dia mifanaraka tanteraka amin'ny fitaovana marobe, azo jerena tanteraka amin'ny rafitra fiasa malaza indrindra toa ny iOS, Android, Windows, macOS, Linux, ary Android TV. Amin'ny fisoratana anarana tokana NordVPN dia hahafahanao mankafy ny tsiambaratelo sy ny tsiambaratelo tanteraka amin'ny fitaovana enina miaraka, ny sisa ataonao dia miditra amin'ny app NordVPN anao
Ka aza atao ambanin-javatra ny filaminana sy ny fiainanao an-tserasera: tsindrio eto ary mahazoa ny tolotra voafetra: NordVPN 72% off ary 3 volana maimaim-poana amin'ny € 2.64 isam-bolana ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » IPhone Security » Antony 7 hampiasa VPN amin'ny iPhone na iPad anao
Ary ho an'ny fahitalavitra mahira-tsaina ve misy zavatra mitovy?